N N – Page2– Shwe Thuta
J NAW ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ…..
N N | April 15, 2021
ချစ် ပရိသတ်ကြီး ရေ ဖက်ရှင် စူပါ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ J Naw ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ထိပ်တန်း မော်ဒယ်လ် တွေ ထဲက တစ်ယောက် အပါဝင် ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမ ဟာ မိန်းကလေးတိုင်း အားကျ ရလောက်အောင် အနေ အထိုင်၊
အိချောပိုရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….
အိချောပို က ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုတွေ ကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး အနု ပညာနယ်ပယ်မှာ အကောင်းဆုံး ရပ်တည်နေ တဲ့ မင်းသမီးချာ လေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမက တော့ တမူထူးခြား တဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရားတွေ နဲ့ လုံးကြီးပေါက် လှ အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေး
ခေးလုကြီးရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
N N | April 14, 2021
မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းအားကျရတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားနို င်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ယခုမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက် တင်ပေးလေ့ရှိသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုး
ဝါဆိုမိုးဦးတို့ ညီအစ်မတွေ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်……
အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဝါသနာ ပါလွန်း တာကြောင့် ကလေးဘဝ ကတည်းက သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ သူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဝါဆိုမိုးဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကိုယ်လုံး လေးဟာလည်း မိန်းက လေးချင်းတောင် ငေးမော ယူရလောက်အောင် မိမိုက်လွန်းနေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဆိုဟာ သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကိုသာမကဘဲ
ချစ် ပရိသတ်ကြီး ရေ ရှင်ယွန်းမြ တ် ကတော့ ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရရှိထား တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ သူမ ကတော့ မြင်သူတကာ ငေးမောလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း
မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……
ပရိသတ်ကြီး ရေ ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား ပြေပြစ် ညီညာ ပြီး ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်း စွဲ မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ မိုးမြင့် သဇင် ကို သိကြ မယ်ထင်ပါ တယ် နော်။ တစ် ခေတ် တစ်ခါ ကမြန်မာ ဗီဒီယို လောကရဲ့
စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ TIK TOK ဗီဒီယိုလေး….
မော်ဒယ်လ် စုလှိုင်ဝင်း က တော့ ပရိသတ် တွေကြား မှာ ရေပန်းစား အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အနု ပညာ လောက မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်ထား နိုင်ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အနု
ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထား
ပရိသတ်ကြီး ရေ ….. အနု ပညာ လောက မှာ ဇာတ်လမ်း တွဲ‌တွေ များစွာ ရိုက်ကူး ထားနိုင် သလို ရုပ်ရှင် ကားကြီး တွေပါ ရိုက်ကူးအောင်မြင် နေတဲ့ သူလေး ကတော့ မင်းသမီး ချောလေး ခေးဆက်သွင် ပါ နော်။ သူမ ဟာ ပွင့်လင်း
မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ဆယ်စုနီးပါး အနုပညာအလုပ်တွေ ကို လုပ်ကိုင်လာခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေ ကြောင့် အောင်မြင်မှု တွေ ရရှိခဲ့ပါ တယ်။ ယနေ့ အချိန်ထိ လည်း အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်တိုက် လုပ်ကိုင် နေခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်မှုတွေ ကို ပိုမို
ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….